Ilwad Elman Oo Ku Guulaystay Abaalmarinta Ugu Sareysa Ee Jarmalku siiyo Shaqsiyaadka Afrika | Hayaan News
Ilwad Elman Oo Ku Guulaystay Abaalmarinta Ugu Sareysa Ee Jarmalku siiyo Shaqsiyaadka Afrika
October 20, 2020 - Written by admin
Germany(Hayaannews):- Ilwad Elman oo ah gabadh Soomaaliyeed oo u ololeysa nabadda ayaa sanadkaan 2020 ku guulaysatay Abaalmarin caalami ah oo la siiyo shaqsiyaadka ugu firfircoon qaaradda Afrika oo ay bixiso hay’adda Jarmal-Afrika Foundation.
Hay’adda ayaa xaqiijisay in Ilwad Elman oo madax ka ah hay’adda Elman oo u ololaysa ilaalinta xuquuqda Aadanaha, lagu sharfi doono dhammaadka bishan magaalada Berlin, sida lagasoo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalka.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan aqoonsigan ka helay Jarmalka, ayay Ilwad u sheegtay Deutsche Welle oo ah warbaahin caalami ah oo kutaal Jarmalka kadib markay maqashay abaalmarinteeda.
Abaalmarinta Jarmalka waxaa la siiyay tan iyo 1993 shakhsiyaad ku dayasho mudan oo ka socda qaaradda Afrika. Ku guuleystayaashii hore waxay u ololeeyeen dimuqraadiyadda, nabadda, xuquuqda aadanaha, farshaxanka iyo dhaqanka, iyo arrimaha bulshada.
Abaalmarinta Afrika waa abaalmarinta ugu sareysa ee nooceeda ah ee Jarmalka bixiyo. Ujeedadeeda laga leeyahay waxay tahay in lagu muujiyo muuqaalka wanaagsan ee Afrika.
Ku guuleystayaashii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Botswana Sir Ketumile Masire, Waris Diiriye oo ah gabadh Soomaali ah oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha iyo la dagaalanka Gudniinka Fircooniga iyo hogaamiyaha midowga Tunisia Houcine Abassi.
Jarmalka Afrika Foundation waxaa maalgeliya Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jarmalka.